Ubushushu-Ngaba uyayazi into entsha yeAmazon Prime series? | IBezzia
'Ubushushu': Uthotho olutsha lweAmazon oluya kukoyisa
USusana godoy | 30/03/2021 14:00 | Iindaba
Inyaniso kukuba zininzi izihloko eziza kumaqonga. Ke ngoko, akukho nto ifana nokubheja kwezinye zezona zidumileyo kwaye kule meko, sinayo leyo. 'I-La Temperance' ifike kwiAmazon Prime kwaye sele iyenye yeempumelelo ezinkulu, ethetha ngawo wonke umntu.
Ayisiyonto incinci! Kuba imalunga umbono osekwe kwinoveli engaziwayo kaMaría Dueñas. Kuyo, singonwabela umdlalo wexesha elidibanisa iisetingi ezivela eJerez okanye eCádiz phakathi kwabanye. Ke sele kubonakala ngathi iya kuba sisiseko esihle sokonwabela yonke into anokuthi asixelele yona kunye nokutolikwa okubalaseleyo kwabalinganiswa bakhe.
1 Yintoni 'Ubushushu' malunga
2 Kutheni uthotho olutsha lweAmazon Prime luza kusitsala
3 UMaría Dueñas uyaqhubeka nokufumana impumelelo kwiscreen esincinci
4 Impumelelo ebesele inyukile emkhonweni wayo
Yintoni 'Ubushushu' malunga
Singatsho ukuba ngumdlalo wembali, oya kusigcina sisondele esofeni. Ibali ligxile kusapho lakwaMontalvo elinelifa elikhulu, enkosi kwinto yokuba bazinikele kwishishini lewayini kwaye baneevenkile zewayini kufutshane kakhulu neJerez de la Frontera. Siza kuba nakho ukonwabela zonke ezi ndawo zibalaseleyo kolu ngcelele, kunye nezona zitalato zingumqondiso wesixeko. Kodwa ukongeza, ibali ligxile kwelinye icala lehlabathi eMexico naseCuba kwaye ngaphandle kokulibala iLondon. Ewe iimeko ezininzi kodwa iqhina elifanayo kunye nesiphumo esiya kothusa. Amashishini osapho, amasiko, imali kunye neemfihlo ziya kuba yinxalenye yesakhiwo seAmazon Prime series.
Kutheni uthotho olutsha lweAmazon Prime luza kusitsala
Njengoko besiphawula, 'I-La Temperance' yidrama kodwa ikwafihla ibali elihle lothando. I-Soledad Montalvo inento yokwenza nobomi awayengakulungelanga, kuba wayemncinci kwaye ngenxa yokuba ikamva lakhe linxibelelene nomnye umntu. Kwelinye icala, uMauro naye uyazi iintlungu esemncinci kakhulu kwaye ikamva lifuna ukuba bobabini badibane. Kuqala ngeshishini kodwa nakwiintsapho. Iimbambano ezahlukeneyo zosapho kunye nezentlalo ziya kubonakala kolu luhlu. Abalinganiswa abaphambili kunye nendima yabo iya kuba sesinye sezizathu zokufumana umtya nothotho. Kwelinye icala kukho uLeonor Watling kwelinye icala uRafael Novoa. Phakathi kwabo nguJuana Acosta okanye uRaúl Briones, naye onendima engumzekelo.
UMaría Dueñas uyaqhubeka nokufumana impumelelo kwiscreen esincinci
Kubonakala ngathi uhlengahlengiso lweencwadi zikaMaría Dueñas ziyimpumelelo enkulu. Kwelinye icala sasinalo 'Ixesha eliphakathi kwemigangatho' athe wakwazi ukusibamba sobabini kwifomathi yencwadi kwaye kamva kuthotho lweTV. 'La Temperance' luthotho olusuka ku-2015 olusixelela ngelinye ixesha, kodwa malunga nokuhamba, amabhongo kunye nokudibanisa izinto eziya kuthi ekugqibeleni zibe yimpumelelo esele siyikhankanyile. Ke ikwayenye yeempumelelo ezinje ngeyokuqala. Ngokufanayo inamandla abasetyhini kodwa kunye nokuthandana kunye neendawo zokwenyani ezizezinye zezinto ezilungileyo ekufuneka zithathelwe ingqalelo.
Impumelelo ebesele inyukile emkhonweni wayo
Kuyinyani ukuba umbono wokuziqhelanisa wawusele ungaphezulu kokucinga. Kodwa khange yenziwe ngenxa yokuba, ewe, ibifunwa ukuba iqhubeke ngokweenkcukacha ezinkulu. Kubonakala ngathi enye idatha sele ikhombe kwimbono yokuba umbono waqala ukwenziwa ngaphezulu kweminyaka emi-4 eyadlulayo. Ezi ntlobo zeemveliso kuthiwa zinzima kakhulu, kuba zininzi iindawo zokufota, amabali angena ngaphakathi kunye nokunye okuninzi. Ukushiya iqela elikhulu ngasemva kwemidlalo kusenziwa wonke umsebenzi onzima. Yiyo loo nto de ibe yonke into ibotshelelwe kakuhle, umbono oqinileyo wokuyityhala kwaye uyiveze khange unikezele. Ewe kunjalo, iphuma ngexesha elifanelekileyo, kuba 'iLa Templanza' iza kukuonwabisa.
Imifanekiso: Ividiyo enkulu yeAmazon
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Iindaba » 'Ubushushu': Uthotho olutsha lweAmazon oluya kukoyisa
Ngaba ukubaleka kwisisu esingenanto ngumbono olungileyo okanye ombi?